U-ELLEN ARKBRO: UVAVANYO LWEALBHAMU YE-CHORDS - IINDABA
Ekulandeleni i-albhamu yakhe ka-2017 Kwilungu lobhedu Umqambi waseSweden ungene nzulu kunxibelelwano lwe-microtonal, elungelelanisa indawo yethiyori yentloko kunye nokuqaqamba kwemvakalelo.
Dlala iTrek AMANQAKU kwilungu -UEllen ArkbroUkuhamba Ibhendi / Thenga
Isihloko sika-Ellen Arkbro ’s IINKCUKACHA ayinakuba ichane ngakumbi-okanye ichaneke. Ukuqamba kwakhe ixesha elide, okokuqala wadibana no-2017 omangalisayo Kwilungu lobhedu , iqulethe ngokupheleleyo ukuhambelana okutyebileyo okunikezelwe kwiinkqubo zokucoca ezingacacanga, zikhutshwe enye ngexesha. Imiculo emnandi, isingqisho, iingoma, kunye nezinye ii-chestnuts ezithandwayo esidla ngokuzonwabisa kumculo zilahlwe ecaleni ngokungagungqiyo. Ukumamela umsebenzi ka-Arkbro kuthetha ukumamela ii-chord kwaye akukho nto iyenye.
Ukuba oko kuvakala kubuthuntu, okanye kungqongqo, okanye kubuchwephesha, awuzange uve ezi zikhetho. Nangona kudliwanondlebe neArkbro inomdla malunga nezifundo ezisebenza kakhulu ezinje ngamanqanaba okuphuma, inkqubo yekhompyuter eyinkimbinkimbi ye-SuperCollider, kunye ne-tuba ye-microtonal, umculo wakhe uxhonywe yimvakalelo enzulu egqitha kwimvelaphi yayo. Ukungena emasangweni obungqongqo obukhulu, IINKCUKACHA ifumana ubuncwane babucala kwindawo encinci okanye eyoluliweyo.
Icala le-A libuyela kwilungu kwi-CHORDS yelungu. Apha isixhobo sivelisiwe kwaye asiphelelwanga, kwaye umbono wokuqala ngowesikali-isitokhwe esikhulu samathoni adumbayo, aqhwithele, kwaye akhuphe indawo. Amanqaku ayongezwa kwaye athathwe kunye nokususwa okupholileyo kwegcisa. Ilanga O))) 'nguStephen O'Malley kutsha nje kuchaziwe Amava okusebenza nobudlelwane obuqhelekileyo njengokufana nokuba lingqina kwizinto, uluvo olufumana ukuthengwa okuninzi apha. I-cadence ye-Arkbro inomgangatho oqaqambileyo ngokumangalisayo; Ubeka into nganye entsha ehambelana nokutshintsha kwezinto kunye nenyani-yenyani yesilarha esinobunzima benyama. Nangona kunjalo ukungabikho kothando okanye umdlalo weqonga usebenza kumculo, kusivumela ukuba sive ubunzulu kunye namandla kwilungu ngaphandle kokuziva silawulwa okanye sifunwa kwi-epiphany ethile ebalwayo.
La manyathelo angqongqo linyathelo okanye amabini kude ne-dbt yakhe. Ukuthelekisa ii-albhamu, IINKCUKACHA Inobuzaza obukhulu ngakumbi, kwaye ikwakhona nentsimbi eninzi. Kwilungu lobhedu ngamanye amaxesha ukhumbula iminqweno ethe cwaka ka-Arthur Russell Inqaba yeNtsingiselo , kodwa IINKCUKACHA iziva ingacacisi kwaye ifana namandla endalo. Ingakhuthaza uloyiko, uloyiko, ukuzola okunzulu, okanye ukuphazamiseka kovalo, kodwa oko kukuwe. Ukukhutshwa kweendaba kuchaza i-albhamu njengoko yakhiwe kwindibaniselwano yeetoni, kodwa uziva ngathi iithowuni zikhethe iArkbro, hayi enye indlela. Okukhona uhlala nabo, kokukhona bethetha.
Kwicala le-B, i-Arkbro ishenxisela kugitala, nangona kuvakala ngokungafaniyo apha. Ngaba oku kungangumsebenzi wokulungisa? Okanye u-Arkbro ubuyile kwilizwe lesoftware, apho ebesebenza khona kude kube kutshanje? Siva umtya ngamnye uvakala ngaxeshanye, ubotshiwe ngengoma efana nesimbonono, kwi-cascade ye-languid. Isenzo sibolile ngokwenene, apho imitya ihlangana khona kwi-stasis entle, nangona ingakutshabalalisi kwangoko kwangoko njengoko ilungu lakhe lisebenza, nto leyo evakalelwa ngokungathi kukuhlola okungenamda kwezo zinto ziphelayo. Ndikhunjuzwa kukukhangela kukaMorton Feldman izandi ezingenamthombo. Ukuhlaselwa kwesandi asilohlobo lwayo, kubanjwe umqambi. Ukonakala, nangona kunjalo, lo mhlaba uhambayo, oku kubonisa apho isandi sikhona ezindlebeni zethu-sishiya kunokuba size kuthi. Isiqwenga esakhiwe ngokupheleleyo kwezi zinto zingumphunga ezidadayo sinokuba ngamava. Nangona AMANQAKU egitare esiya kwicala lale mfihlakalo, awufiki ncam. Iphantse yabalasela, iphantse yalalisa ngomva, kwaye phantse iziva ingenanto, kodwa hayi ncam.
Oku akusiyo impembelelo kumsebenzi ka-Arkbro, nangona kunjalo. Ukuqala kwakhe wabonisa igcisa eliselula eliqamba ngokuqiniseka okumangalisayo nangokucaca kombono, kwaye IINKCUKACHA yinyathelo elilandelayo elomeleleyo, elothusayo ngamanye amaxesha. Yiphulaphule ngokusondeleyo kwaye uzame ukumelana nokungeniswa kukungaboni kakuhle, ukubetha i-viscera yecala le-A. Inqaku elinye lixhomeke emoyeni, lijikeleza ngokungcangcazela kwe-sludgy. Umzuzwana uyajoyina, kwaye ngequbuliso ukuhlangana kwezi zinto zimbini kubangela ukubethabethana. Kodwa ke kukho into engezantsi, isijwili esinzulu, siphendulwe yi-jackhammer drill yendibaniselwano elandelayo. Ixesha libonakala ngathi liyabanda njengoko uhleli apho, ukhupha le paradox ipholileyo yokuzola kunye nokuhamba. Xa i-Arkbro iphinda ivelise i-octave esezantsi engakhathalelwanga-uyilibale. Oku kunokuqhubeka ngonaphakade.
Watkins iyure yosapho fiona apile
Itempile yokuphononongwa kwenja
matt berninger intolongo yenyoka
I-albhamu entsha ye-lil peep
Umsindo ogqwesileyo ngokuchasene nealbhamu yomatshini
iingoma zewiz khalifa onifc
Ukuphela kwekhulu leminyaka